यूएससी फोटोग्राफ: यो फोटो टूरमा क्याम्पसमा अन्वेषण गर्नुहोस्
दक्षिणी क्यालिफोर्निया फोटो टूर विश्वविद्यालय
01 को 20
दक्षिणी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय
यूएससी चिन्ह (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
दक्षिणी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय 1880 मा स्थापित भएको थियो, यो क्यालिफोर्नियाको सबैभन्दा पुरानो निजी विश्वविद्यालय बनाइयो। वर्तमानमा 38,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छन्, यो देशको सबैभन्दा ठूलो निजी विश्वविद्यालयहरू पनि हो।
यूएससी एक पार्क परिसर को रूप मा जाना जाता परिसर परिसर मा लॉस एन्जलस को डाउनटाउन कला र शिक्षा कोरिडोर को दिल मा स्थित छ। यूएससीको विद्यालय रङहरू कार्डिनल र सुनका छन्, र यसको नक्कल एक ट्रोजन हो।
यूएससी धेरै महाविद्यालयको घर हो र अध्ययनको विभाजन: डर्नस्की कलेज अफ लिटर, कला र विज्ञान, अकाउन्टिंग लेविन्थल स्कूल, आर्किटेक्चर स्कूल, बिजनेस मार्शल स्कूल, सिनेटिक आर्ट्स स्कूल, एन्नेबर्ग बर्बर स्कूल अफ कम्युनिटीज र हेमन ओस्ट्रो स्कूल रोस्सियर स्कूल अफ एजुकेशन, विट्बोरी स्कूल अफ ईन्जिनियरिङ्, रस्कि स्कूल अफ फाइन आर्ट्स, डेभिन्स स्कूल अफ गेरोनोलॉजी, कान गोल्ड स्कूल, किके स्कूल अफ मेसिस, थोरटन स्कुल अफ द म्याच, व्यावसायिक साइंस र व्यावसायिक थेरेपी को प्रभाग, फार्मेसी स्कूल , बायोकोइनियरिओलजी र फिजिकल थेरेपी को विभाजन, सोल मूल्य स्कूल ओफ पब्लिक पोलिसी, र स्कूल अफ सोसायटी।
जबकि विश्वविद्यालय आफ्नो अकादमी को व्यापक रूप से जाना जाता है, यूएससी ट्रोजन एथलेटिक कार्यक्रमों को समान रूप से मनाया जाता है। Trojans NCAA डिभीजन प्यासिफिक -12 सम्मेलनमा प्रतिस्पर्धा र 92 एनसीएए राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप जितेको छ। यूएससी फुटबल टोलीले अधिक रोजोबोल्लस जितेको छ र अर्को पहिलो गोल एनएफएल ड्राफ्टमा कुनै अन्य कलेजको टोली भन्दा बढी छ।
02 को 20
यूएससी विद्यालयको सिनेमेट आर्ट
यूएससी विद्यालयको सिनेटिक आर्ट्स (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
यूएससी राष्ट्र 1929मा सिनेटिक आर्ट्स स्कूलको लागि निर्माण शुरु गर्दा एक चलचित्र स्कूल सिर्जना गर्न राष्ट्रमा पहिलो विश्वविद्यालय थियो। आज, यो संसारमा सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलको रूपमा चिनिन्छ।
सिनेमिक कला स्कूलले क्रान्तिगत अध्ययन, एनिमेशन र डिजिटल आर्ट्स, अन्तरक्रियात्मक मिडिया, चलचित्र र टिभि उत्पादन, उत्पादन, लेखन, मिडिया आर्ट्स र प्रविधि, साथै साथ मार्शल स्कूल अफ बिजनको साथ मनोरञ्जनको व्यवसायमा कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ।
संसारको मनोरञ्जन राजधानीमा रहेको, सिनेटिक आर्ट्स स्कूल धेरै उल्लेखनीय दान प्राप्तकर्ताहरू हुन्। 2006 मा, स्टार वार्स र इंडियाना जोन्सका निर्माता जर्ज लुकासले विद्यालय विस्तार गर्न 175 मिलियन डलर दान गरे। उहाँको नाममा 137000-वर्ग फुटको निर्माण गरिएको थियो। अन्य दानहरू 20 औं सताब्दी फक्स ध्वनिस्टेज र इलेक्ट्रोनिक खेल नवाचार ल्याब समावेश गर्दछ।
03 को 20
यूएससी मकार्टी क्वाड
यूएससी मकार्टी क्वाड (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
डाउनी मेमोरियल लाइब्रेरीको लागी म्याकर्ती क्वाड हो, विश्वविद्यालय पार्क क्याम्पसमा विद्यार्थी गतिविधिको लागि एक हब। क्वाड यूएससी ट्रस्टी कैथलीन डाइटी मैकर्ती को दान द्वारा बनाईएको थियो।
जबकि मेकर्ती क्वाडले विद्यार्थीहरूलाई मङ्गलबार र क्लासहरूको बीचमा आराम गर्न एक लोकप्रिय ठाउँ हो, त्यो त्यस्ता उत्सव र कन्सर्टको लागि ठाउँको रूपमा कार्य गर्दछ। यूएससी क्वाड्रानलमा अन्तर्राष्ट्रिय खाना महोत्सव, भित्ताका किताबहरू, "स्प्रिंग फेस्ट" जस्ता वार्षिक घटनाक्रमले क्वाटर्र्यानमा ल्याप्पा फेसको, एबर्लिन र तेस्रो नेत्र ब्लाइन्डको अतीत प्रदर्शनको साथ केहि नाम राखेको छ। 2010 मा, राष्ट्रपति ओबामाले यूएससी विद्यार्थीहरूलाई ट्रैक्टरमा एक भाषण दिए।
ट्रोजन फुटबल खेल दिन मा, McCarthy Quad अक्सर छात्रहरु र pregame गतिविधिहरुमा भाग लेने वाला प्रशंसकों संग पैक गरिन्छ। परम्परागत रूपमा, यूएससी मार्चिङ बैंडले मेकार्टी क्वाडको कलमसमलाई प्रशंसक बनाउँछ।
नजिकैको McCarthy क्वाड छोड्ने लाइब्रेरी, दुई मुख्य स्नातक पुस्तकालयहरु मध्ये एक, र बर्ननटन्ट रिसेन्डिलेसनियल कलेज, एक आठ कथा ताजा डर्मिटरी छ।
04 मध्ये 20
यूएससी पेर्डी टावर
यूएससी पेर्डी टावर (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
Pardee टॉवर एक आठ-मंजिल को सह निवास निवास हो जो डोनी मेमोरियल लाइब्रेरी र म्याकर्टी क्वाड को समानांतर स्थित छ। Pardee छिमेकीहरू मार्क हॉल, ट्रोजन हॉल र मार्क्स टावर; यसमा सबै दक्षिण क्षेत्र आवासीय कलेज समावेश गर्दछ। दक्षिण एरिया आवास हॉल डबल अधिग्रहण कोठा र सांप्रदायिक बाथरूम हो, उनलाई आदर्श बनाएर Freshman dorms।
पेर्डी दक्षिण एरियामा सबैभन्दा ठूलो आवासीय हिल 2889को क्षमता भएको छ। हालैको पुनर्स्थापित लबी अध्ययन अध्ययन क्षेत्रहरु र टिभी हेर्ने क्षेत्र हो। दोस्रो फ्लोरमा एक टिभी र किचननेट विद्यार्थीहरूका लागि आरक्षित छ।
05 को 20
यूएससी डोहोनी मेमोरियल लाइब्रेरी
यूएससी डोहोनी मेमोरियल लाइब्रेरी। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
यूएससीको मुख्य स्नातकोत्तर लाइब्रेरीमा परिसरको केन्द्रमा स्थित डोहोनी मेमोरियल लाइब्रेरी हो। 1932 मा, लस एंजेल्स तेल टाइकून एडवर्ड डाउनीले लाइब्रेरी निर्माण गर्न 1.1 मिलियन डलर दान गरे। आज, गोरखा संरचना एक पुस्तकालय र दुवै यूएससीको बौद्धिक र सांस्कृतिक गन्तव्यको रूपमा काम गर्दछ, व्याख्यान, पढाइ र प्रदर्शन होस्टिंग।
लाइब्रेरीको ग्राउण्ड फ्लो सिनेमा-टेलिभिजन लाइब्रेरी हो, जुन 20,000 पुस्तकहरू र पाँच हॉलीवुड चलचित्र स्टुडियोहरूको अभिलेख राखिन्छ। सिनेमा-टेलिभिजन लाइब्रेरीले हलिवुड अभिनेता र फिल्म निर्माताहरूबाट मेमोरेबिलियाको एक महत्त्वपूर्ण संग्रह पनि पाउँछ। ग्लोबल फर्शको उत्तरतिर संगीत लाइब्रेरी हो, जुन 55,000 संगीत स्कोरहरू, 25,000 ध्वनि रेकर्डिङहरू र 20,000 पुस्तकहरू छन्। अतीत लाइब्रेरी एक आंगन छ, विद्यार्थीहरु को लागि एक अध्ययन को लागि लोकप्रिय या लोकप्रिय LiteraTea चाय घर मा एक पेय प्राप्त।
यूएससीको विशेष संग्रहको लागि खजाना कक्ष, प्रदर्शनी दोस्रो फ्लोरमा स्थित छ। दोस्रो तल्ला लुइस एन्जलस टाइम्स सन्दर्भ कक्षको लागि घर हो, जोहोनी लाइब्रेरीमा सबैभन्दा ठूलो र व्यस्ततम अध्ययन कक्ष। तेस्रो तल्लाले अभिलेखीय सामग्रीको संरक्षण र अधिग्रहणका लागि धेरै कार्यस्थान र कार्यालयहरू राख्छ। बौद्धिक कमेन्ट विद्यार्थीहरूका लागि एक सहयोगी अध्ययन स्पेस हो, जसमा सिचहरू र कुर्सियां ​​साथै सम्मेलन कक्षहरू छन्।
06 को 20
संचार र पत्रकारिताका लागि यूएससी एन्नेबर्ग
संचार र पत्रकारिताका लागि यूएससी एन्नेबर्ग स्कूल (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
1977 मा राजदूत वाल्टर एच। अन्नबर्ग द्वारा संचार र पत्रकारिताको लागि एननेबर्ग स्कूल स्थापना भएको थियो। क्रोमवेल फिल्ड, एन्निर्गबर्गको नजिकैको नजिकैको नजिकै 2,000 स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरू तीनवटा प्रोग्राममा नामाकरण गरिएको छ: संचार, पत्रकारिता र सार्वजनिक सम्बन्ध।
Annenberg मा स्नातक कला को डिग्री संचार, पत्रकारिता, र सार्वजनिक सम्बन्ध मा प्रदान गर्दछ। यसको अतिरिक्त, स्कूल मा मार्केटिंग डिग्री मामिला प्रबंधन, ग्लोबल कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, विशेष पत्रकारिता, सार्वजनिक डिप्लोमेसी, सामरिक सार्वजनिक सम्बन्ध, र संचार मा पीएचडी कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
एक तीन-क्यामेरा स्टूडियो, टेलिभिजन न्यूजरूम, डिजिटल प्रयोगशाला, र रेडियो स्टेसन एनिनबर्गमा विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध केहि स्रोतहरू छन्। स्कूल डेभी ट्रोजन , यूएससीको आधिकारिक छात्र समाचार पत्र, ट्रोजन भिजन, एक विद्यार्थी-संचालित विश्वविद्यालय टिभी च्यानल र यूएससीको विद्यार्थी-रेडियो रेडियो स्टेशन सहित यूएससीको बहुमतको स्रोत हो।
07 मध्ये 20
यूएससी एल्युमिनी मेमोरियल पार्क
यूएससी एल्युमिनी स्मारक पार्क (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
परिसर को केन्द्र मा स्थित यूएससी को अल्युमिनी मेमोरियल पार्क हो, यसको चित्रित वृक्ष, घास, गुलाब बगैचा, र एक ठूलो फव्वारे। डोहेनी मेमोरियल लाइब्रेरी, बवर्डअडोर्टिरियम, र वोन क्लिनसिड सेन्टर पार्क को वरिपरि छ। यस पार्कले शैक्षिक वर्ष भरमा विभिन्न प्रकारका कन्सर्टहरू, कार्यक्रमहरू, र विद्यार्थी घटनाहरू मेजबान गर्दछ। यूएससीको उद्घाटन समारोह हरेक मईमा अल्युमिनी पार्कमा आयोजित छ।
पार्कको केन्द्रमा 1933 मा फ्रेडरिक विलियम श्वीगर्ड्ट द्वारा बनाईएको "युवती ट्राइफफैंन्ट" फाउन्डेन हो। फाउन्तन मूलतः सैन डिएगोमा प्रदर्शित गरिएको थियो, जब सम्म श्री र श्रीमती रबर्ट कार्मन-रिलिले यसलाई 1935 मा यूएससीमा दान गरे। चार घुटने व्यक्तिहरूले घर, समुदाय, विद्यालय र चर्चको प्रतीक, अमेरिकी लोकतान्त्रिका चार कोस्टोनहरूको रूपमा चिनिन्छन्।
08 को 20
यूएससी वोन क्लेनसिड सेन्टर
यूएससी वोन क्लेनसिड सेन्टर (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
वोन क्लेनस्मिड सेन्ट्रल र पब्लिक अफिस अफ सैंड सेन्टर एक उजुरी पार्क मा स्थित एक स्नातक स्तर को पुस्तकालय हो। पुस्तकालय 450 देखि अधिक शैक्षिक पत्रिकाहरु को लागि 200,000 देखि अधिक पुस्तकहरु र सदस्यता लिन्छ। वोन क्लेनसिड सेन्टर पत्र, आर्ट्स, र साइंसेन्सको डर्नसिई कलेजको माध्यमबाट स्नातक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यक्रमको लागि पनि घर हो। यूएससीको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले 100 भन्दा धेरै झण्डाहरू वोन क्लेनस्मिड सेन्टको प्रवेशमा लगाउँछन्।
यो केन्द्र 1966 मा यूएससीको पाँचौं अध्यक्ष, डा। रुफस बी। वोन क्लीनको उद्देश्यमा एक क्षेत्र सिर्जना गर्ने उद्देश्य "कन्सुलर र राजनयिक सेवाका लागि राजदूतहरूको प्रशिक्षणको लागि प्रस्तुत गर्ने अवसर, वाणिज्य र व्यापार प्रशासनका व्यवसायीहरूको , र कलेजहरु र विश्वविद्यालयहरु मा दुनिया को सम्बन्ध संग सम्बन्धित विभागहरुमा शिक्षकहरु को लागि। "
आज वोन क्लेनसिड सेन्टर 90,000-भोल्युम विश्व अफसोस संग्रह, कम्युनिस्ट रणनीति र प्रचारमा अनुसन्धान संस्थान, साथसाथै विश्वव्यापी राजनीतिक विज्ञान संक्षेप र जल संसाधन सारांशमा घर छ।
09 मध्ये 20
यूएससी बोवर लेखा परीक्षक
यूएससी बवेरर अडिटारियम (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
बोभर्ड सभागार यूएससीको मुख्य प्रदर्शन स्थल हो। अल्युमिनी पार्क मा स्थित, सीधे डाउनी मेमोरियल लाइब्रेरीबाट, सुविधा को कुल क्षमता 1,235 छ। 1922 मा निर्मित, बोभर्ड मूलतः चर्च सेवाको लागि उद्देश्य थियो, तर यूएससीले यस वर्ष इष्टतम प्रदर्शनको ठाउँ बनाउन ठाउँलाई पुनर्स्थापित गर्यो।
बोभर्ड यूएससी थर्नटन सिम्फनी आर्केस्ट्रा, राष्ट्रपतिको विशिष्ट कलाकार र व्याख्यान सीरीज, र यूएससीएसपीईसीटीआरम, विद्यार्थी कार्यहरु को एक विभाजन जसले वार्षिक कला र व्याख्यान कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ। भूतपूर्व USCSPECTRUM घटनाहरूमा प्रसिद्ध स्ट्रीट कलाकार, शेफर्ड फिएरे, र हास्य केन्द्रीय द्वारा आयोजित एक कमेडी शो द्वारा व्याख्यान समावेश गर्दछ।
10 मध्ये 20
यूएससी गैलेन सेन्टर
यूएससी ग्लेन सेन्टर (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
10,258 सीट क्षेत्र यूएससी बास्केटबल र भ्यालीबलको घर हो। ग्यालन को केन्द्र 2006 मा यूएससी समुदाय को एक नयाँ, राज्य को अत्याधुनिक खेल सुविधा को रूप मा पेश गरियो। एक बैंकिङ र ट्राजान्सन प्रशंसकको लुई गैलेनले 50 मिलियन डलर दान गरेको बेला स्थायी, परम्परागत इनडोर क्षेत्रको लागि अनुदान 2002 मा सुरु भयो। Figueroa सेन्ट मा विश्वविद्यालय पार्क परिसर मा स्थित छ, गैलेन केन्द्र 255,000 वर्ग फुट संरचना हो जसको 45,000 वर्ग फुट पर्वियन्स छ जसको चार पूर्ण बास्केटबल कोर्ट र9वाल्लिबल कोर्टहरु र 1,000 को लागि बैठता छ।
ग्लेन सेन्टरले एथलेटिक कार्यालयहरू, प्रकार्य कोठाहरू, व्यापारिक भण्डारहरू, र एथलीटहरूको लागि भारोत्तोलन गर्ने कोठाहरू पनि सञ्चालन गर्दछ। स्थल बहु-उद्देश्य सुविधाको रूपमा कार्य गर्दछ, हाई स्कूल स्पोर्टिङ कार्यक्रमहरू, कन्सर्टहरू, व्याख्यानहरू, पानाहरू, र वार्षिक बच्चाहरूको छनौट अवार्डहरू होस्टिंग।
11 मध्ये 20
यूएससी लस एंजिल्स मेमोरियल कलिसम
यूएससी लस एन्जलस मेमोरियल कलियस (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
लस एंजिल्स मेमोरियल कलिजम यूएससी ट्रोजन फुटबल टोलीको मुख्य घर हो। एक्स्पोजेशन पार्क को परिसर देखि एक ब्लक दूर स्थित छ, कोलोमेम को 93,000 को क्षमता छ, जसमा एक नियमित रूप देखि पौराणिक यूएससी बनाम यूसीएलए र यूएससी बनाम Notre Dame प्रतिद्वंद्व खेलहरु को लागि भरी छ।
1923 मा सिर्जना गरिएको, कलसमले शताब्दीमा धेरै खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो 1932 र 1984 ओलम्पिक खेलका लागि साइट थियो, र धेरै सुपर बलमा, विश्व शृंखला, र एक्स खेलहरू।
कांस्यको एक जोडी, एक महिला र पुरुषको नग्न मूर्तिहरू, ओलम्पिक गेटवे भनिन्छ, रबर्ट ग्राहमले 1984 ओलम्पिकको लागि बनाईएको थियो। मूर्तिहरूले स्टेडियमको मुख्य प्रवेशको पालना गर्दछ। मुख्य प्रवेश द्वार ओलम्पिक मशाच हो, जो ओलम्पिक खेल को सम्मान मा बनाइयो। यूएससी फुटबल खेलको चौथे क्वाटरको दौडान मशाल जलाएको छ।
12 मध्ये 20
यूएससी रोनाल्ड ट्यूटर परिसर केन्द्र
यूएससी रोनाल्ड ट्यूटर क्याम्पस सेन्टर (फोटोमा विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
यूएससी नयाँ सुविधाहरु मध्ये एक, रोनाल्ड ट्यूटर कलेज परिसर यूएससी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय पार्क को दिल को रूप मा कार्य गर्दछ। केन्द्र 2010 मा एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थी / प्रशासनिक कार्य तथा गतिविधिहरू केन्द्रित भएको थियो।
रोनाल्ड ट्यूटर परिसर केन्द्र यूएससी स्वयंसेवक केन्द्र, विद्यार्थी सरकार, प्रवेश, क्याम्पसमा क्रियाकलाप अफिस, आतिथ्य र अनुसूची कार्यालयको लागि मुख्यालयको रूपमा कार्य गर्दछ।
तहखाने मा स्थित Ballroom हो जुन 1,200 मान्छे को सीट गर्न सक्छ। सङ्गीत, व्याख्यान, र औपचारिक डिनरहरू साथै विद्यार्थी समूह गतिविधिहरू बॉलरूममा होस्ट गरिएका छन्।
बाहिरी सउचहरू, तालिकाहरू र पाटोको फर्नीचरले केन्द्रीय आंगनको बहुमत बनाउँछ, जहाँ विद्यार्थीहरूले खानेकुरा र कक्षाहरूमा वा सप्ताहांतको समयमा आराम गर्छन। आंगन को लागी अर्को खाना कोर्ट हो, जो कि कार्ल को जूनियर, वहाओोस माछा टाकोस, क्यालिफोर्निया पिज्जा भान्सा, कफी बीन, र पांडा एक्सप्रेस सहित विभिन्न विकल्पहरु प्रदान गर्दछ। परम्पराहरु, बूथ र फ्लैट स्क्रीन टीवी संग एक स्पोर्ट्स बार तहखाने मा स्थित छ। परम्पराहरूसँग जोडिएको टमीको स्थान, एक प्रदर्शन क्याफे छ, जसमा पूल तालिकाहरू र फुटबल खेलहरू हेर्नका लागि विद्यार्थीहरूको लागि ठूलो स्क्रीन समावेश छ। यूएससीले हालै नै मोरितन फग, खुल्ला भान्सामा खुला भोजनालय, पूर्ण पट्टी र एक मौसमी, खेती-देखि-मेज मेनु स्थापना गरेको छ।
20 मध्ये 20
यूएससी प्रवेश र ट्रोजन परिवार कक्ष
यूएससी प्रवेश र ट्रोजन परिवार कक्ष (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
यूएससी प्रवेश कार्यालय रोनाल्ड ट्यूटर परिसर केन्द्रमा स्थित छ। यो ट्रोजन परिवार कक्ष (माथि चित्रित) को दोस्रो तल्लामा छ।
प्रवेश कार्यालयको अतिरिक्त, ट्रोजन परिवार कक्ष पनि बैठक बैठकको रूपमा सेवा गर्दछ र ट्रोजन स्मारकका लागि प्रदर्शन। कोठा माथिल्लो फर्नीचर संग सजाइयो। प्रवेश द्वारमा एक कन्जरायल काउन्टर अल्पसंख्यक र सम्भवतः विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने हो।
यूएससीमा प्रवेश अत्यधिक छनौट छ, र सबै आवेदकहरूको चौथाई भन्दा कम भर्ना हुनेछ। यदि तपाइँ प्रवेशको लागि लक्ष्यमा हुनुहुन्छ भने, यो USC GPA, SAT र ACT ग्राफ हेर्नुहोस् ।
14 मध्ये 20
यूएससी क्रोमवेल फील्ड
यूएससी क्रोमवेल फील्ड (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
66,000 वर्ग फुट लियोन केन्द्र विद्यार्थी संघका लागि यूएससीको प्राथमिक मनोरञ्जन र फिटनेस केन्द्र हो। लियोन सेन्टर एक 21,800 वर्ग फुट जिम, मुख्य जिम को रूप मा जाना, बास्केटबल, बैडमिंटन, र वॉलिबल को लागि जाना जाता छ। मुख्य जिम कहिलेकाहीँ पुरुष र महिलाहरूको बास्केटबल अभ्यासका लागि प्रयोग गरिन्छ। लियोन सेन्टरमा स्थित यो क्लग परिवार केन्द्र, एक वजन कक्ष, रोबिनसन फिटनेस रूम, एक साइकल कोठा, एक खुट्टा कोठा, एक सहायक फिटनेस रूम, स्क्वैश कोर्ट, एक चढाई पर्खाल र एक प्रो पसल हो।
लियोन सेन्टर नजिकै छ, म्याकडोनाल्डको स्टो स्टेडियम यूएससी मेन्स र महिलाहरु को टाई र डेभ टीम र वाटर पोलो टोली हो। 50 मीटर पूलले 1984 ओलम्पिकको आयोजना गर्यो।
क्र्लोवेल फील्ड (माथि चित्रित) लियोन सेन्टर देखि केहि मिनेट को पैदल दूरी मा छ र सुविधा को मुख्य आउटडोर मनोरंजन केंद्र को रूप मा कार्य गर्दछ। यस क्षेत्र को डेन क्रोमवेल, 12 एनसीएएए शीर्षकहरु को विजेता को नाम मा राखयो, र यूएससी ट्रयाक र फील्ड प्रोग्राम को घर हो। ट्रयाकमा आठ-लेनहरू हुन्छन्, र 1984 ओलम्पिकमा अभ्यास अभ्यासको रूपमा सेवा गरे। क्र्लोवेल फिल्डको उत्तर पक्षमा 3000 सीटहरू लोकर स्टेडियमको रूपमा चिनिन्छन्, जुन 2001 मा पूरा भयो।
15 मध्ये 20
यूएससी विटेरेर स्कूल अफ ईन्जिनियरिङ्
यूएससी विटेरेर स्कूल अफ ईन्जिनियरिङ् (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
सन् 2004 मा, ईन्जिनियरिङ् स्कूल एन्ड्रयू र इरेना विटेरेर स्कूल अफ इन्जिनियरिङ को नामकरण गरिएको थियो। 52 मिलियन डलर पछी क्युयुकोमको सह-संस्थापक एन्ड्रयू विटिर्बको उपाधि दिए। हाल, त्यहाँ 1,800 स्नातक र 3,800 स्नातक विद्यार्थीहरू नामांकन छन्। स्नातक ईन्जिनियरिङ् कार्यक्रम लगातार 10 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को भित्र स्थान मा छ।
स्कूल एरोस्पेस ईन्जिनियरिङ्, मकोनिकल ईन्जिनियरिङ्, खगोल शास्त्रीय ईन्जिनियरिङ्, बायोमेडिकल ईन्जिनियरिङ्, केमिकल ईन्जिनियरिङ्, सिविल ईन्जिनियरिङ्, पर्यावरण ईन्जिनियरिङ्, इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ्, औद्योगिक र सिस्टम्स ईन्जिनियरिङ्, र कम्प्यूटर साइंस मा डिग्री प्रदान गर्दछ
Viterbi स्कूल इन्जिनियरिङ धेरै उल्लेखनीय अनुसन्धान केन्द्रहरुको घर पनि छ। मानवीय संस्थानको लागि बायोमेडिकल ईन्जिनियरिङ्, 1 99 8 मा स्थापित, मानव स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न व्यावसायिक चिकित्सा प्रविधिहरू विकास गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दछ। संस्थानको क्रिएटिव टेक्नोलोजीहरू अमेरिकी सेना र कम्प्युटर कम्पनीहरूसँग राष्ट्रको सिक्ने क्षमतालाई सुधार्न नयाँ सफ्टवेयर विकास गर्न सहयोग गर्दछ। संस्थानले सैनिक प्रशिक्षणका लागि धेरै वर्चुअल कार्यक्रमहरू सिर्जना गरेका छन। 2003 मा स्थापित, बायोमेमेमेटिटी माइक्रोइलेक्ट्रोनिक सिस्टम्स-ईन्जिनियरिङ् रिसर्च सेन्टर अहिले अप्परिवर्तनीय माइक्रोइलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु को शोध र विकास को लागी अपरिहार्य रोगहरु को उपचार को लागी छ।
16 मध्ये 20
यूएससी वेबब टाउको आवासीय कलेज
यूएससी वेबब टवर आवासीय कलेज (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
14-कथाहरू उच्चमा, वेबब टवर यूएससीको उच्च आवासीय भवन हो। वेबब टवरसँग फ्लोर प्लान्टहरूको विस्तृत विविधता छ, सिंगल, डबल्स, र ट्रयाकहरू, स्नानघरहरू र यहाँ स्टुडियो अपार्टमेन्टहरूमा। उच्च उदयको अपार्टमेन्ट भवनको रूपमा, वेबब टवरले क्याम्पसमा र लस एन्जलसको महान विचार प्रदान गर्दछ। सोफोरोस र केहि जूनियर्स सामान्यतया वेबब टवरमा बस्छन्, जबकि अधिकांश माथिल्लो क्लास्टार्मन बन्द-क्याम्पसमा बस्छन्।
वेबब टवर सजिलै संग लियोन सेन्टर पछि, यूएससीको ओन्ड-क्याम्पस व्यायामशाला र किंग्स हॉल, जो एक भोजन कक्ष र कम्प्युटर प्रयोगशाला छ। यो पनि एक पाँच मिनेट पैदल दूरी परिसर को रूप मा छ, अल्पनी पार्क।
17 मध्ये 20
यूएससी मार्शल स्कूल बिजनेस
यूएससी मार्शल स्कूल बिजनेस (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
मार्शल स्कूल अफ बिज़नस कम्युनिटी एण्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनको रूपमा 1922 मा सुरु भयो। 1 997मा गोरख एस मार्शलले 35 मिलियन डलर दान गरेपछि स्कूल पुन: नामाकरण गरिएको थियो। 3,538 स्नातक र 1,777 स्नातक विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। मार्शल स्कूल अफ बिजनेस संसारको शीर्ष व्यवसायिक विद्यालयहरू बीचको स्थानमा रहेको छ।
मार्शल यूएससीका स्कूलहरूको सबैभन्दा ठूलो हो, चार बहु-कथा भवनहरू कब्जा गर्दै: पपोविच हल, होफमन हॉल, पुल हॉल, र अकाउन्टिंग बिल्डिंग। माथि चित्रित पिपोविच हल, मार्शल स्कूल अफ बिजनको लागि मुख्य भवन हो।
स्कूल लेखांकन र व्यवसाय प्रशासन स्नातक कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ, र सात स्नातक विभागहरू छन्: लेखा, मार्केटिंग, उद्यमी, वित्त र व्यापार अर्थशास्त्र, सूचना र संचालन व्यवस्थापन, व्यवस्थापन र संगठन, र व्यवस्थापन संचार। स्नातक विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक नीति स्कूल र पत्र, कला, र विज्ञानको डर्नसिई कलेजमा साउन्ड्रेशनसँग मार्शलका पाठ्यक्रमहरू संयोजन गर्न सक्षम छन्। मार्शल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउन्टिंग, बिजनेस कराधान, र अन्तरराष्ट्रीय व्यापार शिक्षा र अनुसन्धान मा मास्टर कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
18 मध्ये 20
यूएससी मूल्य स्कूल को सार्वजनिक नीति
यूएससी मूल्य विद्यालयको सार्वजनिक नीति (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
सन् 1929मा स्थापित सोल मूल्य स्कूल पब्लिक नीति, पोजोविच हॉल र अल्युमिनी हाउस भित्रै स्थित छ। वर्तमानमा 450 स्नातक र 725 स्नातक विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।
मूल्य, नीति, योजना र विकास पाठ्यक्रम मा स्नातक को स्नातक, स्वास्थ्य नीति र प्रबंधन, गैर-लाभकारी र सामाजिक नवाचार, सार्वजनिक नीति र कानून, रियल एस्टेट विकास, र सतत योजना मा पटरिहरु संग।
सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति, शहरी योजना, रीयल एस्टेट विकास, र स्वास्थ्य प्रशासनमा मास्टर कार्यक्रमहरू उपलब्ध छन् साथै डक्टल स्तरमा, सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन, मूल्य निर्धारण कार्यक्रमहरू, शहरी योजना र विकास, र नीति, योजना, र मूल्य प्रस्ताव कार्यक्रमहरू उपलब्ध छन्। विकास। मूल्य सार्वजनिक मामलाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो स्नातक स्कूलहरु लाई श्रेणीबद्ध गरिएको छ।
पाँच मास्टर कार्यक्रमहरु को अतिरिक्त, पब्लिक पॉलिसी प्राइस स्कूल को स्वास्थ्य प्रशासन, नेतृत्व, र अन्तर्राष्ट्रीय पब्लिक नीति र प्रबंधन मा तीन कार्यकारी मास्टर डिग्री कार्यक्रम पनि प्रदान गर्दछ।
20 मध्ये 1 9
यूएससी अल्युमिनी हाउस
यूएससी एल्युमिनी हाउस (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
अल्युमिनी हाउस 1880 मा बनाइयो र यूएससीको क्याम्पसमा पहिलो भवन थियो। 1955 मा यसलाई राज्य ऐतिहासिक स्मारक घोषित गरिएको थियो। एल्युमिनी हाउस यूएससी अल्युनिनी एसोसिएशनका लागि मुख्यालयको रूपमा कार्य गर्दछ। संसारभरको 300,000 भन्दा अधिक अल्पसंख्यक संग, अल्युमिनी एसोसिएसनले सबै 100 अल्पसंख्यक समूहहरू संलग्न गर्न चाहन्छ। एसोसिएशन यूएससी छात्रवृत्ति को लागि धन जुटाने को लागि छात्रवृत्ति को लागि दुनिया भर मा घटनाहरु को मेजबान गर्दछ। एल्युमिनी हाउस यूएससी पूर्वयुद्धको लागि एक-क्याम्पस क्लब घरको रूपमा कार्य गर्दछ।
यूएससी विश्वविद्यालय ग्राम
यूएससी विश्वविद्यालय गाँउ (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: मारियासा बेंजामिन
युनिवर्सिटी गाँउ एक क्षेत्र हो, जो यूएससी द्वारा स्वामित्व मा छ, सीधा जफरसन बोलेवर्ड को परिसर देखि सडक मा। यूवी परिसरको केन्द्रबाट पाँच मिनेट हिड्ने एक सुविधाजनक छ। विश्वविद्यालय गाँउ स्टर्डबक्स, योशिनोया र एक रेडियो श्याक जस्तै स्टोर संग एक विद्यार्थी किनमेल केन्द्र को घर हो। किनमेल केन्द्रमा बाल सैलून, बाइक पसल, र चलचित्र थियेटर पनि छ।
युनिवर्सिटी गाँउले यूएससी-स्वामित्वको विद्यार्थी आवासमा कार्डिनल गार्डन र शताब्दी एपार्टमेन्टको घर पनि घर छ। कार्डिनल गार्डन र शताब्दी अपार्टमेट्स शहर-घर शैली, एक वा दुई-बेडरूम अपार्टमेन्ट हो। प्रत्येक अपार्टमेंट मा एक भान्सा र बाथरूम छ। बाहिर रेत वालेबल अदालतहरू, बास्केटबल कोर्टहरू, र बारबेक्यूहरूसँग एक पेन्टा। अपार्टमेट्स सामान्यतः upperclassmen द्वारा कब्जा गरिन्छ।
यसको मूल्याङ्कन गरिएको वास्तुकलालाई दिइनेछ, विश्वविद्यालय गाँउ 2013 मा शहरी पुनरुत्थान कार्यक्रम चलाउनेछ। $ 900 मिलियन परियोजनाले हालको किनमेल केन्द्र र कार्डिनल गार्डन र सदी अपार्टमेन्ट ध्वस्त गर्नेछ। नविकरणमा एक पड़ोसी बजार, रेस्टुरेन्ट, पार्कहरू, खुदरा भण्डारहरू, र नयाँ यूएससी-स्वामित्वको अपार्टमेन्ट समावेश हुनेछ। भवनहरू यूएससीको हस्ताक्षर भूमध्य शैलीमा डिजाइन गरिनेछ।
यसले दक्षिणी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको दौरा समाप्ति गर्दछ। थप सिक्ने यी लिङ्कहरू पछ्याउनुहोस्:
यूएससी प्रवेश प्रोफाइल
यूपीसीका लागि जीएपी, एसट र एक्ट ग्राफ
शीर्ष क्यानाडाली कलेजहरू
शीर्ष पश्चिम कोस्ट कलेज
आधिकारिक युएससी वेबसाइट
ल्यान्डस्केप वास्तुकला र डिजाइनका लागि शीर्ष स्कूल
लस एंजिल्स क्षेत्र 4-वर्ष कलेज र विश्वविद्यालयहरू
सेन्ट लरेंस विश्वविद्यालय फोटो टूर
बिग दस सम्मेलन
एक विद्यार्थी विद्यार्थी के हो?
एस्पर्गरको सिन्ड्रोम - अटिज्म स्पेक्ट्रमको उच्चतम प्रकार्य समाप्ति
कोभलेंट वा आणविक यौगिक गुणहरू
पहिलो-समय घर खरीददार कर क्रेडिट (एचबीटीसी)
गोल्फ टूर्नामेंटमा 'उडान' के हो?
वारसा सवा सम्पदा: लेट ट्वेंटिथ सदी रूसी उपकरण
उदाहरण खरिदका वाक्यहरू
कसैलाई जर्मनमा शुभ जन्मदिनको शुभकामना
1820 देखि 1830 सम्म समयरेखा
जर्मन क्रिसमस गहने
व्यक्तिगत उच्चारण मा जापानी
अफ्रिकाको गैर-पश्चिमी संगीतको आवाज, भारत र पोलिनेसिया
धर्मको रूपमा धर्म, टेक्नोलोजी बनाम टेक्नोलोजी
स्वेच्छा लज सेन्टमेमेनीज को उपचार लाभ को रिकर्ड्स
तपाईंको हाई स्कूल मित्रहरूसँग कसरी छुनुहोस्
जापानी शब्द कन्जर्जेशन: ग्रुप दुई
तपाईंको मनपर्ने बैंडहरू टूरमा 2016 मा
अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको उद्धरण
ट्रुमन सिद्धान्त र शीत युद्ध
आमाबाबुको बारेमा बाइबल पदहरू
पशु Totems: Bear को रूप मा Totems
स्टेग अन्तर्राष्ट्रिय 1000 डीएक्स टेबल टेनिस तालिका
इटालियन-अङ्ग्रेजी शब्दकोश - पत्र एच
जर्मन प्लानल वर्णमाला I
सर्वश्रेष्ठ हैवी मेटल पत्रिका